Ekwesịrị m ikwupụta ego akwụpụtara na PayPal na Treasury? | ECommerce ozi ọma
Ekwesịrị m ikwupụta ego akwụpụtara na PayPal na Treasury?
Ọ na-abụwanye ihe a na-ahụkarị maka azụmahịa azụmahịa n'etiti ụlọ ahịa na azụmaahịa dị n'ịntanetị ka a na-enyefe ha site na usoro ịkwụ ụgwọ pụrụ iche dịka PayPal. Ruo n'ókè nke ị nwere ike ịjụ onwe gị site ugbu a gaa n'ihu ma m ga-eme ya kwupụta ego akwụpụtara na PayPal na Akaụntụ. Nke a bụ ajụjụ na-eweta ọtụtụ obi abụọ n'etiti ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ dijitalụ.
Tupu ị nweta azịza maka ozi a na-achọ ịmara, ị kwesịrị ịma nke ọma ihe nke a pụtara ịkwụ ụgwọ bụ yana ihe ọ mejupụtara n'oge na-adịbeghị anya. Ọfọn, paypal bụ ụlọ ọrụ America nke na-arụ ọrụ usoro ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ gburugburu ụwa nke na-akwado nnyefe ego n'etiti ndị ọrụ ma na-eje ozi dị ka ihe ntanetị dị iche iche na usoro ịkwụ ụgwọ ọdịnala dịka ego na iwu ego.
N'ezie, ọtụtụ n'ime ụlọ ahịa ndị a dị n'ịntanetị na-akwado ịkwụ ụgwọ a iji nyefee nzụta nke ndị ahịa ha ma ọ bụ ndị ọrụ ha. Ruo n'ókè na ọ nwere ike ịghọ usoro mwepu. N'ọnọdụ ọ bụla, ị kwesịrị ịma na nke a bụ usoro ịkwụ ụgwọ nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị họọrọ, saịtị ndị ahịa na ụdị azụmahịa ndị ọzọ. N'ọnọdụ ọ bụla, jiri usoro ọrụ dị iche iche dịgasị iche iche dabere na arụmọrụ na njirimara nke onye natara ịkwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ.
1 Paypal: gịnị ka ọ mejupụtara?
2 Gịnị bụ usoro ịkwụ ụgwọ a?
3 Etu esi emeghe akaụntụ na njirimara ndị a?
4 Kwupụta ego akwụpụtara na Akụ
5 Kwupụta arụmọrụ
Paypal: gịnị ka ọ mejupụtara?
Ọ bụ ụzọ nkwụnye ụgwọ ọhụrụ na ụzọ ọhụụ na-enye ndị ọrụ ohere ịzụrụ na azụmahịa na-enweghị ịkekọrịta nkọwa ụlọ akụ gị ha na azụmaahịa ha chọrọ ịzụrụ. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịkwado ndị ọbịa gị na ụlọ ahịa na ntanetị na ị gaghị enweta data ha. Akụkụ a dị ezigbo mkpa n'ihi na na njedebe nke ụbọchị ọ ga - enyere aka ịkwụsị ihe mgbochi nkịtị na azụmahịa kọmputa, ma ọ bụghị nke dị oke mkpa, egwu na a ga - eji nkọwa ụlọ akụ eme ihe n'ụzọ na - adịghị mma.
Mgbe n'aka nke ọzọ, ọ bụ eziokwu na ndị ahịa nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na-eji PayPal nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ịzụta ha site na iji nguzo nke akaụntụ nke aka ha, akaụntụ akụ ma ọ bụ kaadị kredit. Ọ bụ ezie na otu ọ bụla, akụkụ ọzọ ị ga-eburu n'uche site ugbu a gaa n'ihu bụ na ihe achọrọ ịmalite iji usoro Paypal na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị bụ imepe akaụntụ.
Ọdịdị nke ego a abụghị ihe mgbagwoju anya ebe ọ bụ na ọ dabere n'inye usoro ịkwụ ụgwọ nke na-enye ndị ọrụ ya aka ịkwụ ụgwọ na ịnyefe site na withoutntanetị na-enweghị ịkekọrịta ozi ego na onye nnata, yana naanị ihe achọrọ na ha nwere email.
Gịnị bụ usoro ịkwụ ụgwọ a?
Na usoro a ị nwere ike ịrụ ọrụ ma ọ bụ azụmahịa dị iche iche. Mgbe n'aka nke ọzọ, ọ na-enyekwara ọwa aka ebe ị nwere ike ịzụta ọtụtụ ngwaahịa ma ọ bụ ihe nwere nnukwu ego na ọnụahịa mbụ ha. Ha sitere na ntinye akwụkwọ ngwugwu ezumike gaa na ụdị ekwentị mkpanaaka kachasị ọhụrụ. Dika emeputara ya na otutu uzo ahia dijitalụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ọnọdụ ndị ọ bara uru ka ukwuu bụ ndị anyị na-ekpughe n'okpuru:
Lezienụ maka ịzụrụ ihe na ịntanetị.
Chịkọta ahịa emere na thentanetị.
Ziga ma nata ego n'etiti ezi na ụlọ, ndị enyi ma ọ bụ ndị mmadụ n'otu n'otu.
Ihe ozo ndi oru kwesiri ima bu oru ma obu ihe omuma nke ntaneti a. Kedu ka PayPal si arụ ọrụ? Ọfọn, n'ụzọ anyị ga-esi gosipụta site ugbu a gawa:
Izipu ego ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ site na Paypal bụ n'efu. Onye nnata ahụ nwere ike ịbụ mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla, ma ọ nwere akaụntụ Paypal ma ọ bụ na ọ nwere, nke nwere adreesị ozi-e. N'ọnọdụ niile, ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ ịkwụ ụgwọ iji kwado ojiji ya n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu na nke ahụ nwere ike ịbụ ihe ndị a:
Site na kaadi kredit ma ọ bụ kaadị debit na ebe a na-anabata usoro niile enyere na mba niile.
Nkwụnye Akaụntụ Paypal. Nke ahụ bụ ịsị, site na nguzozi a ị nwere ike ịzụrụ ihe n'ime ntanetị dijitalụ a, ma ọ bụ tụgharịa akụkụ ma ọ bụ ngụkọta ngụkọta nke dị ruo oge ahụ. Na oke dị elu karịa nguzozi, na-enweghị oke mgbochi na arụmọrụ ego.
Dị ka akaụntụ akụ.
Etu esi emeghe akaụntụ na njirimara ndị a?
Nke mbụ, ị ga-ahọrọ obodo ebe a ga-arụ ọrụ ahụ, yana asụsụ (Bekee, Spanish, French, German, wdg) na n'ezie usoro mmezi. Ọ bụ kpomkwem a ikpeazụ ngalaba na-ewetara ya kasị ukwuu dị iche dị ka o nwere ọtụtụ amụma na ị nwere ike ịdenye aha site ugbu a gaa n'ihu:
Akaụntụ nke Onwe (maka ndị zụrụ).
Akaụntụ mbụ (maka ndị na-azụ ma na-ere).
Akaụntụ azụmahịa (maka ụlọ ọrụ ndị na-ere n'onntanet).
N'ọnọdụ niile, ndị ọrụ ga-edejupụta aha ndebanye na email, paswọọdụ, aha, aha nna, adreesị ozi-e, akara ekwentị na ụdị kaadị. Ọ bụrụ na ihe niile na-aga n'ihu n'ụzọ zuru oke, ị ga-enwe ike ịnwe otu n'ime akụkọ ndị a.
N'aka nke ọzọ, ọ dị mkpa iji mesie ike na iji usoro ịkwụ ụgwọ a. Otu n'ime ihe ndị a na-apụta:
Ọ bụ ọrụ bụ n'efu, na-enweghị ọrụ ma ọ bụ ụgwọ.
Naanị ha kwesịrị itinye adreesị ozi-e na paswọọdụ iji kwụọ ụgwọ.
Ha agaghị etinye nkọwa kaadị ha maka ịzụta ọ bụla.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ profaịlụ njirimara niile nwere ike ịnweta ebe ọ bụ naanị otu njikọ connectionntanetị ka a ga-enye. Site na kọmputa nkeonwe ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla ọzọ. Ọzọkwa, a naghị ekenye onye na-ere ahịa data ego yana yabụ arụmọrụ ga-echekwa nke ọma na usoro niile nke usoro a. N'aka nke ọzọ, ha na-enye gị ọtụtụ nhọrọ ịkwụ ụgwọ: jiri kredit ma ọ bụ kaadị debit, akaụntụ akụ ma ọ bụ ọbụlagodi site na nghazi nke teknụzụ a.
Kwupụta ego akwụpụtara na Akụ
Nke a bụ otu ụzọ dị mkpa ndị ọrụ na gburugburu ụwa siri mee. N'ihi na o nwere njirimara ndị akọwapụtara nke doro anya na ọ dị mkpa iburu n'uche site ugbu a. Ebe i nwere ike iche na ndị mmadụ n’onwe ha na-ahọrọ ma ọ bụ na ọ bụghị maka usoro ịkwụ ụgwọ a pụrụ iche.
Ọfọn, azịza ya bụ na ị gaghị ekwupụta ya. Ma na obere nkenke na ị kwesịrị ịmara ugbu a. Nke ahụ bụ, belụsọ na ihe karịrị 50.000 karịrị ya na Treasury na-amanye ịkọwa iwu ahụ. Nke a na omume pụtara na ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ anaghị enwe nkwupụta a.
Nke a bụ n'ihi na Iwu na-adịbeghị anya 7/2012 guzobere ọrụ ọmụma banyere akụ na ikike dị na mba ofesi. Mana ọrụ a gbasara itinye ego na ụlọ akụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ kredit na mba ọzọ. Na mgbakwunye, RD 1558/2012 na-egbochi oke ibu ọrụ nke ịkpọsa akụkọ ma ọ bụ nkwụnye ego na ụlọ akụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ kredit na mba ofesi karịrị 50.000,00 euro.
Ọ bụ eziokwu na enwere nkọwa ụfọdụ gbasara iwu a nke nwere ike ịchọ nkwupụta nke akụkọ PAYPAL nke nwere ihe karịrị € 50.000. Mana ọ bụ nkọwa m tụlere nke a manyere n'ike na enwere m olile anya na AEAT anaghị eru.
N'adịghị ka ọnọdụ gara aga, na nke a ọ dị mkpa ịkpọsa ụdị mmegharị a. Ọ na-eje ozi dị ka iwu zuru oke na ọrụ ikwupụta ọrụ kpebisiri ike site na ọrụ n'onwe ya na-atụ ụtụ isi, ma ọ bụ ire ụfọdụ dị mma ma ọ bụ ịnye ọrụ ma site na ịnweta ego ọbụlagodi na ịkwụ ụgwọ ego nke Paypal . Ọ bụghị maka echiche nke ego na akaụntụ akụ.
O doro anya na e nwere ihe ndị dị mkpa na ọrụ nke ha dabere na ndokwa ahụ na onye na-eme ya, mana enwere ọtụtụ nke a ga-atụle n'isiokwu nkịtị.
Ndi Enweta ego nwere ike ịrịọ mmeghari ahụ?
N'okwu a, azịza ya doro anya: mba. Maka na ikike njikwa nke alaka ụlọ ọrụ ndị si mba ọzọ na Spain nwere oke, na ọkachasị nlekọta nke Paygwọ itgwọ nke mba EU ndị ọzọ kwekọrọ na ndị isi nke obodo ha.
Site na nke a ọ na - esote na ọ bụrụ na achọrọ ụdị ozi a, ọ ga - ekwe omume na a ga - eme ya dabere na usoro nkwado na okwu ụtụ na EU. Ihe adịghị oke agile na nke ahụ ga-agbanwe na njedebe nke afọ a.
N'echiche a, ekwesịrị ịkọwapụta na Iwu ọhụrụ 2011/16 / EU na-ewepụta ibu ọrụ iji zipu ozi gbasara ego na akụ ndị metụtara oge ụtụ dịka nke Jenụwarị 1, 2014. Ebe ọrụ ikwusa ga-abịa site na nghọta nke taxable omume kwekọrọ na ọ bụla ụtụ isi na ya nwe ya.
Ibu ọrụ nke ikwusa ga-ekpebi site na mmezu nke ihe a na-atụ ụtụ isi kwekọrọ na ụtụ ọ bụla na mkpokọta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ekwesịrị m ikwupụta ego akwụpụtara na PayPal na Treasury?
Ndewo ebe ahụ! Nke mbu, ana m ekele gi nke ukwuu maka edemede a. Enwere m ajụjụ m na-enweghị ike idozi. Enwere azụmahịa Internetntanetị ebe a na-ere ihe ọmụmụ n'ịntanetị, ugboro ugboro. Paypal na-akwụ ụgwọ ahụ. N'ụzọ dị otú a, ruo mgbe ego ruru € 50.000 ruru, enweghị nsogbu, nri?
N'aka nke ọzọ, nke a bụ ajụjụ m nwere, ọ bụ na ọ bụrụ na ị na-ere ihe ọmụmụ, mgbe ị na-anata ego site na ire ere ahụ, a na-ewere ya dịka mmegharị / azụmahịa / ọrụ / ihe ọ bụla ịchọrọ ịkpọ ya, nri? Na nke ahụ, dịka m gụrụ n'isiokwu ahụ, a ghaghị ikwupụta ya. Yabụ ajụjụ m nwere bụ ma ọ bụrụ na ekwuputara ya n'onwe ya maka ọrịre n'onwe ya, ma ọ bụ ọ bụrụ na m ga-arụ ọrụ ụfọdụ iji kwupụta ha, ka m wee ghara inwe nsogbu na Treasury na Spain. nwere ike ịgwa m ma ọ sitere na X ego, na kedu ihe ekwesịrị ime kpọmkwem? Ekele, na-ekele gị nke ukwuu.
Kaadị akwụmụgwọ maka ịkwụ ụgwọ na ecommerce
Uru nke iji Big Data na eCommerce